Tsiahivina mbola voakasiky ny fepetra manokana ny Faritra Analamanga sy ireo distrikan` Toamasina I sy II, Fenerive-Est ary Moramanga. Mbola voafetra tokoa ny asa atao na dia efa nitarina ny ora fiasana. Efa misy ny lamina napetraka eny anivon` ny fitsarana mahakasika ireo asa mandeha. Hisy lamina maro kosa mbola apetraka mahakasika ny fitsarana ahafahana mandray ireo raharaha rehetra. Misy fandaminana mbola apetraka tahaka ireo “audience” na fotoam-pitsarana na ny fahafahan` ireo olona mivezivezy, hoy ny teo anivon` ny ministeran` ny fitsarana. Amin` ny herinandro ambony no hivoaka ny lamina vaovao. Maro ireo raharaha tsy mandeha sy ny olona manana fahasahirana manoloana ny fikatsohana ny asa eny amin`ny fitsarana fa efa miezaka midina ifotony ny minsiteran` ny fitsarana.